रसिया–अमेरिका सम्बन्धमा उतार चढाव - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
रसिया–अमेरिका सम्बन्धमा उतार चढाव
प्रकाशित मिति: २४ श्रावण २०७४, मंगलवार
साउन २४, मस्को । पछिल्लो समयमा रुस र अमेरिकी सम्बन्धमा उतार चढाव जारी छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्वीटमार्फत यसको सङ्केत गरिरहनुभएको छ । गएको शुक्रबार बिहानै ट्वीट गर्दै उहाँले अमेरिका–रुस सम्बन्धमा समस्या आएको जनाउनुभएको थियो । जसमा पछिल्लो समय सम्बन्धमा अनपेक्षित समस्या आउने अवस्था देखिएको उहाँको धारणा थियो । त्यस लगत्तै रसियाली प्रशासन केन्द्र क्रेमलिनले अमेरिका–रसिया सम्बन्ध यसअघिका वर्षहरुको तुलनामा निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको शुक्रबार नै बताएको थियो ।
तर त्यसपछि अमेरिकी प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले लगाएको कडा खालको नाकाबन्दीपछि भने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले रुसको प्रसंशा गर्नुभएको थियो । उहाँले रुस र चीनले पनि सो कार्यमा देखाएको ऐक्यबद्धता प्रसंशनीय रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । त्यसपछि यी दुई देशको सम्बन्धमा सकारात्मक विकास हुने अपेक्षा गरिएको पनि कतिपय विश्लेषकले बताएका छन् ।
रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेश्कोभले केही दिनअघि सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, “अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा व्यक्त गरेको बिचार वास्तविक देखिन पुगेको छ, यतिखेर सम्बन्धको विकास सकारात्मक मोडबाट अघि बढिरहेको छैन ।” दुवै मुलुक र जनताबीच पारस्परिक सहयोग तथा सहकार्य आवश्यक रहेको समयमा यसलाई समस्यातर्फ धकेलिएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाईप्रति रसियाली प्रशासन केन्द्र क्रेमलिनले पनि समान धारणा ल्याएको हो ।
गतबर्ष संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रसियाली हस्तक्षेप भएको भन्ने विषयले निकै चर्चा छाएको थियो । यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको निकायले पनि त्यस समयमा रुसी संलग्नता खुलेको जनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले हिलारी क्लिन्टनलाई हराउन रसियासँग साँठगाँठ गरेको भन्ने अस्वीकार गर्दै आएका छन् । जुरीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका छोरा र रसियाली कानून व्यवसायीबीच जुन २०१६ मा भएको बैठकका सहभागीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
ट्रम्पले निर्वाचन जितेपछि भने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको निकै प्रसंशा गर्नुभएको थियो । तर पनि यसपछिका दिनहरु त्यसरी अघि बढेनन् । हाल आएर भने सो सम्बन्ध विग्रिएको छ । रुसमाथि नाकाबन्दी लगाउनेसम्बन्धी प्रस्तावमा अमेरिकी संसद्ले स्वीकृति दिएको छ । उहाँकै दल रिपब्लिकनले पनि यस कानुनमा सहमति दिएपछि रुसमाथि पनि नाकाबन्दी लगाउन राष्ट्रपति ट्रम्प बाध्य हुनुभएको छ । यसैलाई अमेरिकी र रुसी विश्लेषकहरुले अमेरिकी रुसी सम्बन्धमा उतार चढावका रुपमा हेरेका छन् । रासस
डुङ्गा दुर्घटनामा बेपत्ता १९३ मध्ये चार जनाको शव भेटियो
एजेन्सी । इन्डोनेसियामा भएको एक डुङ्गा दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका ठूलो सङ्ख्याका यात्रुमध्ये चार जनाको शव […]
किम जोङ उन फेरि बेइजिङमा
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग शिखर वार्ताकाे एक हप्तापछि उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता […]
इन्डोनेसियामा डुंगा पल्टदा १ सय ८० जना बेपत्ता
इन्डोनेसिया । इन्डोनेसियाको सुमित्रा क्षेत्रमा अवस्थित टोबा तालमा सोमबार एक डुंगा पल्टदा १ सय ८० […]
यस्तो छ ट्रम्प-किम सम्झौताको पूर्णपाठ
एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प र लोकतान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाका राज्य […]
‘अब उत्तर कोरियादेखि खतरा छैन’
एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरिया अब परमाणु खतराको रूपमा नरहेको बताएका छन्। जुन […]
ट्रम्प-किम शिखर वार्ता : सम्बन्ध सुध्रिने संकेत
एजेन्सी । सिंगापुरमा जारी अमेरिका र उत्तर कोरियाका प्रमुख नेताहरुबीचको ऐतिहासिक भेटलाई लिएर अहिले […]
प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने विद्यार्थी पक्राउ
‘जुम्लामा गोली चलेको छैन,बोतल प्रहारले घाईते प्रहरी जवान जीवित छन्’:प्रहरी
डा. केसीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गरिने
सिड्नीमा “गुल्मेली तीज मेला २०१८” हुने:
डा. केसीलाई सेनाको गणमा लगीयो, काठमाडाैँ ल्याउने तयारी